Hoyga Wararka Marar | Shir Xukuumadda Somaliland iyo Hay’adaha iyo Dalalka caawiya uga furmay Hargeysa (Sawirro)
Shir Xukuumadda Somaliland iyo Hay’adaha iyo Dalalka caawiya uga furmay Hargeysa (Sawirro)
Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta ka furay shir caalami ah oo ay isugu yimaadaan hay’ado iyo dalalka Caawiya Somaliland.
Shirkan oo loogu magac daray isku duwidda mucaawimooyinka Somaliland, isla markaana sanadle ah ayaa noqonaya kii 8aad ee hay’adahaasi iyo madaxda dawladdu ku kulmaan.
Madaxweyne Siilaanyo ayaa khudbad uu ka jeediyey halkaas kaga Sheekeeyey horumarka Somaliland ku talaabsaday dhawr iyo labaatankii sanadood u dambeeyey.
“Iyadoo la ilaalinayo Habkaa Dhaqanka ah ee ah in Nabad wax lagu Xalliyo, Waxaan ku faraxsannahay inaan idiin sheego in Maxkamadda dastuuriga ah si adag oo hab loo dhan yahay ah ay u xallisay khilaafkii dib u dhaca doorashada. kaasoo ah mid loo dhan yahay, dhammaana ay ku qanceen dhinacyada doorashadu khusayso,” ayuu yidhi Madaxweyne Siilaanyo.
Waxaanu intaas ku daray. “Aasaaskaas Adagi Wuxuu Abuuray jawi Dawladda, Bulshada rayidka ah iyo Saaxiibadayada Caalamku ay ugu Wada-shaqeeyaan hab Wax ku ool ah oo wadajir ah iyo iskaashi dhaw si loo xaqiijiyo horumarka oo barnaamijyada loogu fuliyo si guul ah. Beesha caalamka iyo shacbiga Somaliland waxay leeyihiin dhaqan soo jireen ah oo ay wada jir ugu shaqeeyaan. Somaliland waxay tustay saaxiibadeeda inay tahay Masuul si firfircoon uga qayb-qaadanaysa dadaalka caalamiga ah ee looga horjeedo Argagixisada, xagjirnimada iyo budhcad badeeda geeska Africa,”
Wasiirka Arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis, ayaa isna soo dhoweeyey shirkan u furmay dawladda iyo hay’adaha caalamiga ah, waxaanu yidhi “Waxaa la iskugu yimid in la eego horumarka aynu gaadhnay oo ah horumar balaadhan, horumarkaas oo ay aad iyo aad ugu khushuuceen dawladdahan maanta yimid iyo nabaddeenii oo aynu xoojisanay, waxay ka hadleen arrimo xagga horumarka iyo dhaqaalaha ku saabsan, waxaana la eegayaa dhaqaalihii ay ina siiyeen, halkuu marayo, sidii loo sii kobcin lahaa, waxa inaga dhiman, waxaynu ka hagaajinayno, wax qabadka badan ee aynu maanta uga baahan nahay, waxyaabaha kale ee ay ka hadleen ee ay nagala hadleen waxa ka mid ahaa arrimaha doorashada oo ay nagala taliyeen oo aanu u sheegnay in maxakamaddu soo afjartay,”
Waxaa kaloo uu sheegay in bulshada caalamku soo dhawaysay wada hadalkii Somaliland iyo Soomaalliya oo Somaliland diyaar u tahay in la kala dhex galo Somalia “Somaliland waa dad nabad jecel, nabad ayaynu arrimaheena ku xallinay, waxaanu u bandhignay in Somaliland diyaar u tahay in wada hadalkii Somaliland iyo Somalia dib u bilaamaan, iyadoo shuruuda ku xidhani tahay in beesha caalamku na dhexdhexaadiso oo goob joog ka ahaato, oo mid tii turkiga oo kaliya ahaa ka balaadhan la sameeyo, taas ayaanay nagala shaqaynayaan, iyagoo dhammaantoodna muujiyay In wada hadalkaasi yahay muhiim, in nala soo dhex galaana tahay muhiim.”
Sidoo kale, Wasiirka Qorsheynta Qaranka, Sacad Cali Shire ayaa sheegay in 19 hay’ado caalami iyo dalalka taageera Somaliland shirkaasi kasoo Qayb-galeen, waxaanu sheegay in wadamadaasi ka mid ahaa Norway, Denmark, Finland, USA, Britain iyo Waddamo kale.
Sidoo kale, Wasiirku Wuxuu Xusay in kulankan lagu lafo-gurayo wixii Sannadkii hore u qabsoomay & sanadka soo aadan waxa loo baahan yahay in laga qabto dhinaca horumarka iyo bani’aadanimadda, kuwaas oo dawladda iyo hay’aduhu ku kala war qaadanayaan.